Hogaamiyeyaasha maamulada Soomaaliya oo beesha caalamka ka codsaday inay xaliso khilaafka dowlada dhexe kala dhexeeya. – The Voice of Northeastern Kenya
Hogaamiyeyaasha maamulada Soomaaliya oo beesha caalamka ka codsaday inay xaliso khilaafka dowlada dhexe kala dhexeeya.
madaxda maamul goboleedyadda Soomaaliya oo ku sugan Magaalada Nairobi ayaa xalay kulan la yeeshay xubno ka socday beesha Caalamka waxayna ka wada hadleen sidoo lagu soo Afjari lahaa Khilaafka dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah.
Kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxda maamul goboleedyadda Soomaaliya marka laga reebo Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo isagu horay ugu dhawaaqay inay xal ka gaareen khilaafkii maamulkiisa kala dhexeeyay dowlada fedraalka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas sidoo kalena ah Gudoomiyaha hogaamieyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa u soo bandhigay dhexdhexaadin ay garwadeen ka yihiin Beesha Caalamka iyo IGAD oo ku aadan soo Afjaridda Khilaafka maamulada iyo dowlada dhexe.
Madaxda maamuladu waxay u gudbiyay beesha Caalamka Cabashadooda ku aadan waxyaabaha ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ka tabanayaan,wallow kulankaas aysna goob joog ka ahayn masuuliyiin matalaysay dowlada dhexe ee Soomaalia.
Khilaafka dowladda Fedraalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyadda xubnaha ka ah Ayaan wali xal laga gaarin tan iyo markii hogaamiyeyaasha maamulada Soomaaliya ay ku dhawaaqeen inay hakiyeen xiriirkii wadashaqaynta ee ay la lahaayeen dowladda dhexe ee Soomaaliya.
← Doorasho kursi Xildhibaan oo maanta ka dhacaysa magaalada Garowe.
dhagesyo warka subaxnimo 8:00am →